University of Exeter - Waxbarashada Great Britain, England
gaabinta : U of E
aasaasay : 1922
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Exeter
Qor at University of Exeter
The University of Exeter saftay sare ee UK ee 10 ee la soo dhaafay 4 sano (The Times iyo The Guide Sunday Times University Good) oo kaalinta in hogaanka 100 jaamacadaha adduunka sida ay ugu Times Tacliinta Sareqiimeynta caalamiga ah. The darajo CWTS Leiden 2015 na meelaha 34aad ee adduun ee muddo ku lug iskaashiga sayniska iyo saamaynta. Waxaan nahay oo ah xubin ka mid ah Russell Group haybadda leh ee cilmi jaamacadaha degdeg ah.
Tayada waxbarashada iyo waayo-aragnimo ka helay at the University of Exeter la micno tahay inaan falan 8aad ee UK ee dambaynTimes Tacliinta Sare Ardayga Experience Survey.
Sida laga soo xigtay Data ugu dambeeyay Agency Statistics Tacliinta Sare, waxa aanu kaalinta 9-ka mid ah oo dhan jaamacadaha UK waayo guul: 84 boqolkiiba ardayda la mid First ama qalin 2:1.
ardayda Our dalbaday badan oo naga mid ah oo aan iyaga ka mid ah - aan higsan doonno in la sameeyo cilmiga adkaa iyo waxbarashada gaarka ah.
waxbaridda Research-u waxyoonay
shaqaalaha tacliinta Our badan macalimiinta ka buugaag barayay yihiin. Ay qabtaan taasoo keentay in cilmi-maado aad. Sagaashan iyo siddeed boqolkiiba oo ka mid ah cilmi baaris ayaa lagu qiimeeyaa sida dunidu u-hoggaamineed ama caalamku aqoonsan yahay (Research Excellence Framework 2014). Waxaad wax bari doona khubaro iyo qayb ka mid ah dhaqanka ah in waxa laguu waxyooday by cilmi ahaan - waxaad kala hadli doonaa fikradaha aad ugu dambeeyay ee siminaaro iyo Casharrada oo laga yaabaa inay noqdaan xubin firfircoon ka ah kooxda cilmi-a.
At ardayda Exeter ayaa la gelin qalbiga nidaamka iyo la siiyaa xirfadaha iyo qaababka inay u baahiyaan fikirkooda iyaga u gaar ah oo uu doonayo. heerarka sare ee isku halleeya waxaa maalgeliyeen ardayda si ay u qaabeeyaan ay waayo-aragnimo u gaar ah jaamacad iyo cawaaqibka ay yihiin heer sare abaal.
Guild The Ardayda 'waxaa jira si loo fududeeyo iyo hanuunin this, iyo xiriirka wanaagsan ee aan la University waxay leeyihiin u ogolaanaya fikrado isbedelka inay u yimaadaan kuwo mira dhal.
dhaqanka Tani gaar ah waxaa inta badan lagu gaari shuqulka sameeyey by our kamay helin Subject quduuska iyo nidaamka Change Wakiilada ee, laakiin arday walba waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay jawaab-celin iyo galaan bulshada in iyaga koobay. Halkan, qof walba waxa uu ku casuumay in ay qayb ka mid ah bulshada waxa ay noqon, iyo ardayda jidka iyo shaqaalaha ay isu yimaadaan munaasabadaha sida abaalmarinta cilmiga, tusaale ahaan, wadaraha this up. Isagoo u codeeyay in kumanaan ay shaqaalaha ay doonayaan in ay u dabaal-, ardayda waxaa ka dibna la weydiiyey in uu ku biiro shaqaalaha ah xaflad abaalmarin heer sare, Maxaa yeelay, dadka oo dhan ka campus oo sii wada soo socda in la aqoonsado shaqo adag.
Waxa kale oo aanu marti nidaamka hadhaynaya, ardayda ka dib markii xubno ka tirsan shaqaalaha maalin iyo shaqaalaha tusayaan this by iyaga hadhaynaya in soo laabashada. Waxaan ka qayb qaatay sanad kan ugu dambeeya, ka qaybgalka shirarka la-xigeenka ku-xigeenka Chancellor for Education, Janice Kay, oo markaas aan muxaadarooyin iyo siminaaro yimid todobaadkan in. Waxaa jira kala qaybsamin halkan, waxaan oo dhan waa wada shaqeeya iyo qof walba uu dareensan yahay hab.
Madaxweyne ku-xigeenka Guild Ardayda 'Affairs Academic
School Business The
College of Life Sciences iyo Environmental
Deegaanka iyo Institute Sustainability
College of Engineering, Xisaabta iyo Sayniska Jirka
Macdanta iyo Macdanta Engineering
College of Sciences Bulshada iyo Daraasaadka Caalamiga ah
Studies Carabta iyo Islaamka
Sociology, Falsafadda iyo Anthropology
Strategy iyo Institute Security
Art Taariikhda iyo Dhaqanka Visual
Classics iyo Taariikhda Baydka
Xarunta Language Dibadda
Theology iyo Diinta
Institute of Biomedical & Science Clinical
Machadka Cilmi-baarista Caafimaadka
Si aad u dabaal shaqada waxbarashada iyo sayniska ee Prince Albert, iyo waxyiga Exhibition Weyn ee 1851, Exeter School of Art in 1855 iyo Dugsiga Exeter ee Science in 1863 ayaa la aasaasay. In 1868, Dugsiyada of Art iyo Science raray Royal Albert Memorial Museum ee Queen Street, Exeter iyo, iyada oo taageero ka University of Cambridge, noqday Exeter Technical University iyo Extension College in 1893.
In 1900 ay horyaalka si rasmi ah waxaa lagu bedelay in Memorial Royal Albert ee College iyo kulliyadda dhaqaaqay Bradninch Place in Gandy Street. college ayaa waxaa mar kale u baxshay University College of South West of England ee in 1922 ka dib markii college la midoowday xeerkii theCompanies oo ka mid ahaa liiska hay'adaha xaq u leedahay in lacag laga Guddiga Deeqaha University markaas heli. Sida ahayd caado ah in hay'adaha jaamacad cusub ee England ee sagaal iyo labaatanaad hore qarniyo, ardayda kulliyadda diyaariyey darajo dibadda ee Jaamacadda London.
Aaabaheed W H Reed, Duqa hore ee Exeter, deeqay Streatham Hall on Estate Streatham u University College cusub 1922. Streatham Hall waxaa magacooda loo baxshay in Reed Hall ka dib markii ay ka sokay. Isla mar ahaantaana, maamulaha koowaad ee College University ee, ka dib Sir Hector Hetherington, aaminsiiyey Golaha College si ay u soo iibsadaan qayb weyn oo Estate Streatham ah. A gaabiyaa Estate Streatham ka soo dhaqaaqay xarunta magaalada ka dhacay muddo. dhismaha ugu horeeya ee cusub taagay on Estate Streatham ahaa dhismaha Washington oo gabayaa ahaa; dhagax la dhigay by the Prince of Wales (ka dib King Edward VIII), markaas Madaxweynaha College University of South West of England ee. dhismaha ayaa waxaa ka furmay 1931. The hore ee hoolalka Ujeedada-dhisay degan, Mardon Hall, ka furmay 1933. dhismaha labaad tacliimeed ee guryaha la Library Roborough lagu magacaabo aqoonsiga danta qaaday horumarinta kulliyadda by Rabbiga Roborough ugu horeysay, mid ka mid ah lehna ay hore. Roborough Maktabadda waxaa ku wareegsan dhameystirtay 1939.
The University College of South West of England ee noqday Jaamacadda Exeter oo helay Charter ay Royal ee 1955, si sax ah boqol sano ka dib markii formation of Exeter School asalka ah ee Art. Queen Elizabeth II bandhigay Charter in ay jaamacadda on booqasho uu ku Streatham sanadka soo socda.
Jaamacadda maray muddo ah ballaarinta badan 1960. Inta u dhaxaysa 1963 iyo 1968, muddo markii tirada ardayda ee Exeter labanlaab, ma ka yar toban dhismayaasha waaweyn ee la dhammeeyo on estate Streatham iyo sidoo kale hoolalka of joogitaanka agagaarka 1,000 ardayda. Kuwani waxay guryahooda ka mid ah ee waaxaha Chemistry iyo Physics, Newman ka, Dhismayaasha berkedda weysada iyo Engineering iyo Maxkamadda Streatham. Queen Dhismaha ayaa la furay Kuliyada Arts ee 1959 iyo Amory Dhismaha, guryaha Law iyo Cilmiga Bulshada, raacay in 1974. In ka socda labaatankii sano, maal badan waxaa loo sameeyey horumarinta hoyga is-cuntada cusub ee ardayda.
Gifts ka dalalka Gacanka ka dhigay in la dhiso maktabad jaamacad cusub oo ay suuragal tahay 1983 iyo in ka badan dhawaan ayaa loo ogol yahay la abuuro Machadka cusub ee Carabta iyo Islaamka Studies. A deeq weyn oo dheeraad ah karti dhamaystirka Centre Xfi ee Maaliyadda iyo Investment. Tan iyo markii ay 2009, maal-gashiga dheeraad ah la taaban karo ayaa laga galay guri cusub ee ardayga, dhismaha cusub ee Dugsiga Business The, iyo Forum: horumarka cusub ee xarunta of Streatham Campus.
In 1838, Ibraashiga Board Exeter Waxbarashada xalin si helay hay'ad ee waxbarasho iyo tababar ee schoolmasters, initiative ugu horreeyay ee noociisa ee England. Sidaas darteed, sannad ka dib, Tababarka College Exeter Ibraashiga la abuuray ee Cathedral Close, Exeter ee guriga hore u ahaa madaxa Totnes, dhereran Exeter Cathedral. Maamulaha ayaa marka hore waxaa loo magacaabay iyo kulliyadda furay 1840.
Expansion raacay, iyo in 1853, John Hayward (kuwaas oo ahaa ka dib masuul ka ah design ee Memorial Museum Royal Albert ah) loo sameeyey si loo qorsheeyo ujeeddo goobta dhisay kulliyadda on Heavitree Road. dhismaha, inta badan ka dhisay nuuradda cirro ka Duubista Torbaywith Bath Stone, ayaa lagu soo gabagabeeyey by dayrta ee sannadka soo socda. On 18 October 1854, ka dib markii adeeg ee Exeter Cathedral, xafladda furitaanka ah ee dhismayaasha cusub ee lagu qabtay. Laga soo bilaabo taariikhda this in 1854 (Maalinta St Luke ayaa), college la aan rasmi loo yaqaan St Luke ayaa. qaadashada college ee in 1854 ahaa 40 ardayda.
In isku midka ah, ee Royal College Albert Memorial, hindise gudahood waaxda ee Arts iyo Sciences 1912 ugu danbeyn keentay in formation of Institute of Education (kuwaas oo St Luke ayaa College ahaa xubin ka mid ah dastuurka) iyo waaxda gaar ah ee dheeraad ah Studies kabarta loogu tala galay ujeedooyinka tababarka macallimiinta. Exeter Ibraashiga Training College ayaa waxaa si rasmi ah loo baxshay in St Luke ee College Exeter ee 1930 oo noqday co-waxbarasho ee 1966.
In 1978, St Luke ee College Exeter ayaa lagu daro Jaamacadda Exeter. awood A waxaa la abuuray daraysa jaamacadda ee Institute of Education and St Luke ee College Exeter galay School cusub Waxbarashada.
School Medical Peninsula waxay ku sii dhisnaatay 2000 in lala Adeega Caafimaadka Qaranka ee University of Taribo iyo, ku salaysan at St Luke iyo Devon Royal iyo Isbitaalka Exeter. The School of Ilkaha furay 2007 iyo, wada jir ah ula School Peninsula ee Medical, abuuray College Peninsula ee Daawada iyo Caafimaadka Ilkaha. St Luke ee campus waa goobta ugu weyn ee University of School Medical Exeter, oo aqbalay ardayda ugu horeysay ee 2013.
Inta lagu jiro qarniyo siddeed iyo sagaal iyo tobnaad, Cornwall ka mid ah gobollada ugu muhiimsan macdanta metalliferous in dunidu jirin. Camborne School Macdanta la aasaasay 1888 si loo daboolo baahida industry this maxalliga ah.
Camborne School Macdanta waxaa ku yaalla bartamaha Camborne muddo ku dhow qarni, laakiin, ka dib markii maalgashi weyn oo ay ku warshadda macdan qodista caalamiga ah iyo kuwa kale, raray in 1975 xarumaha Ujeedada-dhisay bartamihii hab-u dhexeeya Camborne iyo Redruth. ballaarinta weyn oo kala duwan ee cilmiga iyo cilmi-bixinta ka dhacay inta lagu guda jiro 1980 iyo horraantii 1990, oo ay ku jiraan horumarinta undergraduate oo wax ku baray Barnaamijyada shahaado sarre oo xagga cilmi dhul, sayniska dalaada iyo sahan. In 1993, Camborne School Macdanta waxaa lagu daro Jaamacadda Exeter.
Initiatives by Jaamacadda Exeter iyo kuwa kale si ay u baahiso bixinta waxbarashada sare ee Cornwall keentay Jaamacadaha Forces ee Cornwall (CUC) initiative in 1999. Iyadoo qayb ka ah dadaalkan, Penryn, kaliya ka baxsan Falmouth, noqday goobta of Campus Penryn ah, xarun lala wadaago University Falmouth. Camborne School Macdanta raray Penryn inta lagu guda jiro 2004 marka jaamacadda ee Cornwall Campus cusub furtay.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Exeter ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Exeter rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Exeter
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Exeter.